အိန္ဒိယပညာတတ် ၊ ပညာရှင် ၊ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ဥာဏ်ကြီးတဲ့ လှုပ်ရှားမှု | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeအိန္ဒိယပညာတတ် ၊ ပညာရှင် ၊ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ဥာဏ်ကြီးတဲ့ လှုပ်ရှားမှု
အိန္ဒိယပညာတတ် ၊ ပညာရှင် ၊ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ဥာဏ်ကြီးတဲ့ လှုပ်ရှားမှု
December 4, 2015 drkokogyi
Ko Kyaw Myo
အိန္ဒိယရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ စာရေးပြီး နာမည်လည်းကျော်တဲ့ စာရေးဆရာမကြီး နယန်တာရာ ဆာဂယ်ဟာ သူမကို ချီးမြှင့်ထားတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးစာပေဆု ဆိဟစ်တယအကယ်ဒမီဆုကို မကြာမီက အစိုးရကို ပြန်အပ်လိုက်တယ် ။
ဘာ့ကြောင့်လဲလို့ ဆရာမကြီးက အကြောင်းပြတာကတော့ နိုင်ငံမှာ ကွဲပြားခြားနားမှုအတွက် နေ
ရာမရှိတော့သလောက်ဖြစ်လာနေပြီး လူတွေဟာ လွှမ်းမိုးကြီးစိုးဆဲ အိုင်ဒီယိုလိုဂျီကို သဘောမတူတဲ့အကြောင်းရင်းလောက်နဲ့ သတ်ဖြတ်ခံလာနေရတယ် ။ နိုင်ငံဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၅ လအတွင်း ပိုဆိုးရွားလာတယ်လို့ ဆိုခဲ့တယ် ။
မစ္စဆာဂယ်အပါအဝင် အိန္ဒိယရဲ့ နာမည်ကျော် စာပေပညာရှင်တွေ ၊ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေ ၊ မင်းသားတွေဟာ အခုတလောမှာ သူတို့ ကို နိုင်ငံတော်က ချီးမြှင့်ထားခဲ့တဲ့ ဆု တံဆိပ် ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်
ဘွဲ့ အသီးသီးကို ပြန်အပ်နေကြပါပြီ ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ အမြင်က ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုရှိတဲ့နိုင်ငံမှာ အမဲသားစားခြင်း ၊
အမဲသားထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ ကို ပြည်နယ်တော်တော်များများမှာ ဥပဒေပြုတားမြစ်လာတာ ၊ လူနည်းစု မူစလင်
တစ်ဦးကို မကြာမီက အမဲသားခိုးစားတယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့ လူအုပ်လိုက် အိမ်ကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီး သတ်ဖြတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာ ၊ နောက်ထပ် ခရစ်ယန်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတချို့ ရှိခဲ့တာ ၊ လူနည်းစုတွေအပေါ် ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုတွေ များလာတာတွေဟာ ဒီနှစ်အတွင်း သတင်း
တွေမှာ တော်တော်များများ တက်လာနေခဲ့ပြီး ဒါကခွဲခြားဖိနှိပ်မှုပြယုဂ်ဖြစ်တယ် ယူကြလို့ပဲ ။
ဗမာပရိသတ်တွေကြိုက်ကြတဲ့ အိန္ဒိယမင်းသား အမီရာခန်း
ကိုယ်တိုင်ကလည်း quit India ( အိန္ဒိယက ထွက်မှပဲ ) ဆိုတဲ့မှတ်ချက်ကို မကြာမီက ထုတ်ဖေါ်ခဲ့ရတယ် ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ခန်းက သူ့ ဇနီးကိုယ်နှိုက်ကိုက နိုင်ငံမှာ လူနည်းစုတွေအနေနဲ့ လုံခြုံမှုမရှိတော့သလို ခံစားရလာလို့ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ အိန္ဒိယမှာ ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီပါတီ ဘီဂျေပီအာဏာရလာတဲ့
နောက်ပိုင်း ဒီပြသနာတွေဖြစ်လာတာလို့ စွပ်စွဲမှုတွေ အကျယ်အပြန့် ရှိပါတယ် ။ နိုင်ငံတွင်းမှာ ဘာသာရေးအရလူနည်းစုဖြစ်တဲ့ ခရစ်ယန် ၊ မွတ်စလင်စသဖြင့် လူနည်းစုတွေဟာ အခု မလုံခြူံဘူးဖြစ်နေတာ တကယ်လား ။ လူနည်းစုတွေဟာ စနစ်တကျနဲ့ ကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံနေရ ၊ အပယ်ခံဖြစ်နေရပါပြီလား ။ “မတူညီမှုတွေ
ကို သည်းမခံနိုင်ခြင်းဆိုတာ ဒဏ္ဍာရီ the-myth-of-intolerant လား ၊ တကယ်ဖြစ်နေတာတဲ့လား ။
ဘာပဲပြောပြော ပညာရှင်တွေ ၊ ပညာတတ်တွေဟာ “သည်းမခံနိုင်မှု ဆန့် ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှု” ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် 
လုပ်ဆောင်နေကြပါပြီ ။ ဒီလိုနဲ့ အထက်က ဆိုခဲ့သလို ဆရာမကြီး နယန်တာရာ ဆာဂယ်လိုမျိုးပဲ ဥာဏ်ကြီးတဲ့
အိန္ဒိယပညာတတ်တွေ ၊ ပညာသည်တွေ ၊ ထိပ်တန်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ကိုယ်ရထားတဲ့နိုင်ငံတော်က ချီးမြှင့်တဲ့ ဘွဲ့ တံဆိပ်တွေကို ပြန်အပ်ပြီး
နိုင်ငံတွင်း “အမြင်မတူသူများအပေါ် သည်းမခံနိုင်မှုတွေ တိုးတက်
လာခြင်း ” ကို(‘climate of intolerance’ …raising intolerance စသဖြင့်သုံးကြ) ကို ကန့် ကွက်တဲ့လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပေါ်လာတော့တယ် ။ သိပ်ကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ် ။
ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီး စာရေးဆရာတွေထဲမှာဆိုရင် ဆာလ်မန်ရပ်ရ်ှဒီ ၊ အာရွန်ဒါတီရွိုင်း တို့ လို ကမ္ဘာကျော်တွေပါဝင်သလို ၊ိပံ္ပပညာရှင်တွေဆိုရင်လည်း နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း
အင်စတီကျုဒ်တွေ ၊ အစိုးရဌာနတွေက ပညာရှင်ကြီးတွေ ရာနဲ့ ချီပါဝင်
ကြေငြာချက်ထုတ် ကန့် ကွက်ကြတာဖြစ်တယ် ။
စာရေးဆရာတွေ လက်မှတ်ထိုးကန့် ကွက်ကြေငြာချက်ထုတ်ပြီးနောက်
ဆက်ထွက်လာခဲ့တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ ကြေငြာချက်ထဲမှာလည်း
“စာရေးဆရာတွေက သူတို့ ကန့် ကွက်မှုကို ပြခဲ့ပြီးပါပြီ ။ ကျွန်ုပ်တို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်း အခု အသံထွက်ပြီး ပူးပေါင်းတာဖြစ်တယ် ။ မိမိတို့ ရဲ့ ဗဟုယဉ်ကျေးမှု ၊ သိပ္ပံပညာ ၊ ဆင်ခြင်မှုတို့ ကို ဒီလိုတိုက်ခိုက်တာ တွေ ပြည်သူတွေက လက်ခံမယ်မဟုတ်ပါ ။ လူတွေကို ဘယ်လိုနေ ၊ ဘယ်လိုစား ၊ ဘယ်လိုဝတ် ၊ဘယ်သူ့ ကိုချစ်ရမယ်လို့ ညွှန်ကြားဖို့ 
အမြင်ကျဉ်းမြောင်းလွန်းလှတဲ့ အိန္ဒိယကို ကျုပ်တို့ ငြင်းပယ်တယ်” လို့ ဖေါ်ပြထားတယ် ။
အချုပ်ဆိုရရင်တော့ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ ပညာတတ် ၊ ပညာရှင်ဆိုတွေဟာ မှိန်းလိုက်မနေ ၊ အများကြိုက် ၊ အုပ်စိုးသူကြိုက်ကို မလိုက်ဘဲ ဒီမိုကရေစီကို ကာကွယ်တာဟာ ကောင်းမြတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ် ။ ဗမာပြည်က အနုပညာရှင်ဆိုသူတွေ အတုယူဖို့ ပြန်လည်တင်ပြပေးလိုက်တာဟာ
ဒီမှာ ရည်ရွယ်ရင်းဖြစ်ပါကြောင်း ။
( မှတ်ချက်- အိန္ဒိယလူဦးရေဟာ ၂၀၁၁ မှာတင် ၁ ဒသမ ၂၂၁ ဘီလီယံ ဖြစ်ပြီး ဘာသာရေး
ကိုးကွယ်သူ အချိုးအစားအရ ဟိန္ဒူ ၇၉ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်း ၊ မူစလင် ၁၄ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်း ၊
ခရစ်ယန် ၂ ဒသမ ၃ ၊ ဆစ်ခ် ၁ ဒသမ ၇ ၊ ဗုဒ္ဒဘာသာ ၀ ဒသမ ၇ ၊ ဂျိန်းဘာသာ ၀ ဒသမ ၄ ရှိပါသတဲ့ ။ နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားလို့ ရအောင် )
(ပူးတွဲဖေါ်ပြလိုက်တဲ့ပုံက အင်ဒီးယန်း အိတ်စ်ပရက်စ်သတင်းကဖြစ်ပြီး ၊
ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ ၁၂ ဦးက သူတို့ ရထားတဲ့ နိုင်ငံတော်ဆုတွေကို ပြန်အပ်တဲ့ပုံ
← အင်ဒိုနီးရှား နဲ့ ထိုင်းမှာအားကိုးယုံကြည်ရလောက်တဲ့ ဥပဒေ ရှိနေတယ် အဲ့ဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်လူ ဘယ်ဘုန်းကြီး ဘယ်စစ်သား မှ ရှိမနေဖူး
‎ကျုပ်သားကို‬ ဘယ်သူ အရောင်ဆိုးတာလည်း →
3 thoughts on “အိန္ဒိယပညာတတ် ၊ ပညာရှင် ၊ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ဥာဏ်ကြီးတဲ့ လှုပ်ရှားမှု”
Statement by Artists, Curators and Critics Against Rising Intolerance in India @ http://kafila.org/2015/10/27/statement-against-rising-intolerance-in-india-by-artists-curators-and-critics/
tags: Artists Against Intolerance in India, Ministry of Culture – Govt. of India, Sahitya Akademi Writers Protest
Text ofaStatement by Artists, Curators and Critics in India againstaClimate of Rising Intolerance in India
(Followed by Names of the 300 + Signatories, in Alphabetical Order)
Peace disturbed by rash of bigoted acts, attacks on minorities and Dalits. The scientists did not hide the fact that they had been influenced by the writers’ protest.
Written by Amitabh Sinha | New Delhi | Updated: October 29, 2015
After protests by writers and artists, over 100 distinguished scientists from some of India’s top institutes issuedastatement on Wednesday denouncing the “climate of intolerance” and “a rash of bigoted acts”. The statement —arare public stand byacommunity that is reluctant to voice its collective opinion on non-scientific issues — came justaday after two smaller groups of scientists issued separate statements makingasimilar point. – See more at: http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/top-scientists-join-protest-slam-climate-of-intolerance/#sthash.jwNwI1yH.dpuf
More than 40 authors have handed back major honours inastand against ‘vicious assaults’ on cultural diversity@ http://www.theguardian.com/books/2015/oct/14/indian-writers-return-awards-in-protest-against-climate-of-intolerance